လွယ်ကူလေ့လာသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ (Nouns - နာမ်) - Myanmar Network
လွယ်ကူလေ့လာသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ (Nouns - နာမ်)
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on January 22, 2014 at 15:55 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
လူသားတို့သည် အမည်ပေးတတ်သည့်အမျိုးဖြစ်သည်။ အုပ်စုဖွဲ့တတ်သည့်အမျိုးဖြစ်သည်။ သူတို့မြင်သမျှ၊ တွေးသမျှ အရာအားလုံးကို အမျိုးအစားခွဲ၊ နာမည်များပေးကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဘာသာစကားတစ်ခုတွင်ဝေါဟာအားလုံး၏အများစုအား noun ဟူသည့် အမည်ပေးစကားလုံးများက နေရာယူထားလေ့ရှိသည်။ သင် ငယ်စဉ်က အင်္ဂလိပ်စာ စတင်သင်ကြားခဲ့စဉ်က ပထမဦးဆုံးလေ့လာခဲ့သည့် စကားလုံးများကို စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ။ apple ပန်းသီး။ book စာအုပ် စသည့် အမည်ပေးစကားလုံးများနှင့် ပင်စတင်ခဲ့သည် မဟုတ်ပါလား။
ထို့ကြောင့် ပထမဦးစွာ မှတ်ရန်မှာ-
noun = naming words အမည်ပေး စကားလုံး
တစ်ချို့အရာဝတ္ထုတို့ကို ရေတွက်နိုင်သည်။ ဥပမာ one apple ပန်းသီးတစ်လုံး။
two apples ပန်းသီး နှစ်လုံး။ ၄င်းကဲ့သို့ noun များကို count noun ရေတွက်၍ရသောနာမ် ဟုခေါ်သည်။
သို့ရာတွင် တစ်ချို့နာမ်တို့သည် ရေတွက်ရန် မဖြစ်နိုင်။ ဥပမာ water ရေကို one water တစ်ရေ၊ နှစ်ရေ ဟု ရေတွက်၍ မရနိုင်။ ရေတွက်လိုလျှင် သူ့ရှေ့က container ထည့်စရာခွက် တစ်ခုခုနှင့် တွဲဖက်သုံးရမည်။ ဥပမာaglass of water ရေတစ်ခွက်။abottle of water ရေတစ်ဗူး။ ၄င်းကဲ့သို့ noun များကို uncount noun ရေတွက်၍မရသောနာမ် ဟုခေါ်သည်။
count noun = ရေတွက်၍ ရသောနာမ်
uncount noun = ရေတွက်၍ မရသောနာမ်
Count nouns (ရေတွက်၍ ရသောနာမ်များ)
ရေတွက်၍ရပြီဆိုကတည်းက တစ်ခု၊ နှစ်ခု စသည်ဖြင့် အနည်းနှင့်အများ ခွဲခြားနိုင်သည် မဟုတ်ပါလား။ ထို့ကြောင့် count nouns များတွင် singular တစ်ခုကိန်းနှင့် plural အများကိန်း ဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိသည်။
a book (စာအုပ်တစ်အုပ်) books (စာအုပ်များ)၊
a teacher (ဆရာတစ်ယောက်) teachers(ဆရာများ)
a wish(ဆန္ဒတစ်ခု) wishes(ဆန္ဒများ)
an idea (စိတ်ကူးတစ်ခု) ideas (စိတ်ကူးများ)
ဥပမာabook (စာအုပ်တစ်အုပ်)၊ateacher (ဆရာတစ်ယောက်)၊awish(ဆန္ဒတစ်ခု)၊ an idea (စိတ်ကူးတစ်ခု) တို့သည် singular noun များဖြစ်ပြီး books (စာအုပ်များ)၊ teachers(ဆရာများ)၊ wishes(ဆန္ဒများ)၊ ideas (စိတ်ကူးများ) တို့သည် plural noun များဖြစ်ကြသည်။
ä singular noun တစ်ခုကိန်း
æ plural noun အများကိန်း
Singular တစ်ခုကိန်းတို့ကို သူတို့ချည်း သီးသန့် မသုံးနိုင်ပါ။ သူတို့ကို the, that, a, my စသည့် determiner ဟုခေါ်သည့် နာမ်ကိုအထူးပြုသည့် စကားလုံး တို့နှင့်သော်လည်းကောင်း၊ some,afew, lots of စသည့် quantifier ပမာဏပြသည့် စကားလုံး များနှင့် သော်လည်းကောင်း one, two, three စသည့် numeral အရေအတွက်ပြသည့် စကားလုံးများ နှင့်သော်လည်းကောင်း တွဲဖက်သုံးရသည်။
determiner + noun the book; that English teacher;awish; my latest idea
quantifier + noun some new books;afew teachers; lots of good ideas
numeral + noun two new books; three wishes
the book; that English teacher;awish; my latest idea (determiner + noun)
some new books;afew teachers; lots of good ideas (quantifier + noun)
two new books; three wishes (numeral + noun)
Plural forms အများကိန်း ပုံစံများ
တစ်ခုကိန်းကို အများကိန်း ပြောင်းပါက ယေဘုယျအားဖြင့်
မူလ noun ကို -s ထည့်ပေါင်းသည်။ ဥပမာ- book > books; school > schools; friend > friends
–ss; -ch; -s; -sh; -x နှင့်ဆုံးသည့်စကားလုံးများတွင် -es ထည့်ပေါင်းသည်။ ဥပမာ- class > classes; watch > watches; gas > gases; wish > wishes; box > boxes
(အလွယ်မှတ်လိုပါက စကားလုံးတစ်လုံးကိုအသံထွက်ကြည့်ပါ။ ၄င်းစကားလုံးသည် “စ”၊ “ချ”၊ “ရှ”၊ “ခစစ်” စသည့် hissing sound ဟုခေါ်သော အသံထွက်လျှင် တရှုးရှုးသံထွက်သည့်စကားလုံးများဖြစ်လျှင် -es ပေါင်းပါ။)
noun တစ်ခုသည် consonant + y (ဗျည်း + y) နှင့်ဆုံးလျှင် y ကိုဖြုတ်၍ -ies ပေါင်းပါ။ ဥပမာ lady > ladies; country > countries; party > parties (lady တွင် နောက်ဆုံးအက္ခရာ y ၏ရှေ့တွင်ရှိသောdသည် consonant ဗျည်း ဖြစ်သည်)
noun တစ်ခုသည် vowel + y (သရ+ y) နှင့်ဆုံးလျှင် y ဖြုတ်စရာမလိုဘဲ -s သာ ရိုးရိုးပေါင်းပါ။ ဥပမာ boy > boys; day > days; play > plays (boy တွင် နောက်ဆုံးအက္ခရာ y ၏ရှေ့တွင်ရှိသော o သည် vowel သရ ဖြစ်သည်)
သို့ရာတွင် “There's no hard and fast rules in learning English. အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာရာတွင် ပုံသေကားချပ် ဥပဒေသဟူ၍ မရှိ” ဟူသည့်စကားတစ်ခုရှိသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသည် irregularities ရှေ့နောက် မညီညာမှုများ အတော်ရှိသည့် ဘာသာစကား တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် တစ်ခုကိန်းမှ အများကိန်းပြောင်းရာတွင် အပေါ်က ဥပဒေသများအတိုင်း လိုက်နာ၍ မဖြစ်သည် irregular plurals (ပုံစံမမှန် အများကိန်း) ခြွင်းချက်တစ်ချို့ ရှိပါသည်။ ၄င်းတို့မှာ
ရေတွက်၍ရသော အများကိန်းတို့တွင် အုပ်စုကို ရည်ညွှန်းသည့်အခါ determiners များနှင့်တွဲမသုံးပါ။
ဥပမာ Computers are very expensive.
Exercise: count noun မှန်ကန်သည့် count noun ပုံစံကို ရွေးပါ။
1. The fairy told the girls she could make three ----------.
a. wish b. wishes
2. I think her ________ watch far too much television.
a. child b. children
3. Look! The ________ has just stolen that man's hat!
a. monkey b. monkeys
4. It's difficult beinga________ these days.
a. parent b. parents
5. Why do ________ always come in threes?
a. bus b. buses
6. Does anyone know the ________ to the station?
a. way b. ways
7. ________ are usually shorter than men.
8. A lot of ________ use this street.
a. lorry b. lorries
9. He's the sort of ________ you can trust.
a. person b. people
10. I can hear something in the roof. Have you got ________?
a. mouse b. mice
11. The ________ they wanted to buy has been sold.
a. house b. houses
12. The most interesting ________ I have visited are in Asia.
a. country b. countries
1.b2.b3.a4.a5.b6.a7.b8.b9.a10.b11.a12. b
အိမ်ထောင်ပြုခြင်းနှင့် မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများ
စကားလုံးများနှင့် စကားစုများကိုအထူးပြုခြင်း (Modifying Words and Ph...
Permalink Reply by Thi Thi win on January 23, 2014 at 15:44
Thank ,Basic မှ စ ပြီး Advance အထိ သင်ပေး ပါလို့ မေတ္တာ ရပ်ခံပါတယ်
Permalink Reply by Ya Min on January 23, 2014 at 16:44
Very nice, Thanks for the easy explanation. Please explain more for other useful grammer